पुरुष, दाह्री संग वा दाह्री बिना? - स्टाइलिश पुरुषहरु मा सल्लाह स्टाइलिश पुरुष
पुरुष, दाह्री संग वा दाह्री बिना?
एलिसिया टोमेरो | | व्यक्तिगत हेरचाह, फेसन, कपाल शैली, प्रचलनहरू
दाह्री संग वा दाह्री बिना? पहिले नै धेरै प्रश्न निस्सन्देह उठाईएको छ एक मानिस को शारीरिक रूप को बारे मा। अहिले दाढी धेरै पुरुष र विभिन्न उमेर को आकर्षक हिस्सा हो। तर महिलाहरुलाई के लाग्छ? के दाह्री साँच्चै यति राम्रो छ कि यो तपाइँको रूप परिवर्तन गर्न लायक छ?
दृष्टिकोण धेरै सान्दर्भिक छैन, तपाइँ आफ्नो दाह्री बढाउनु पर्छ र आशा छ कि सबै कुरा यसको जादू गर्दछ। यदि तपाइँ साँच्चै पत्ता लगाउनुहुन्छ कि तपाइँ एक पूरा दाह्री छ, यो महान छ कि तपाइँ कसरी चाल को लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ कि हामी तपाइँलाई दिन सक्छौं। यो लिङ्क। यदि यो भोल्युम दिने र यो सबै भन्दा राम्रो हेरचाह दिने बारे मा छ, हामी पनि सबै छ त्यो मर्दाना भाग बढाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो उपचार.
1 पुरुषहरु दाह्री संग वा दाह्री बिना राम्रो?
2 पुरुषहरु के रुचाउँछन्?
3 कुन कारणले तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ एक दाह्री लगाउनु पर्छ?
4 सबैभन्दा चापलुसी यस बर्ष को लागी देखिन्छ
पुरुषहरु दाह्री संग वा दाह्री बिना राम्रो?
सर्वेक्षण अनुसार महिलाहरु उनीहरु दाह्री भएका पुरुषहरुलाई रुचाउँछन्। र एक शक बिना, परिणाम यति राम्रो छ, कि यो देख्न सकिन्छ कि हामी मध्ये धेरै को अनुहार मा फैशन को एक ठूलो लहर छ। यो अब मात्र केहि भौतिक प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर यो विश्वास गर्न सकिन्छ कि एक मानिस बनाउन सकिन्छ महान प्रजनन कौशल प्रदर्शन गर्दछ र तपाइँ राम्रो स्वास्थ्य मा हुन सक्नुहुन्छ। तर यो तथ्य संग सावधान रहनुहोस्, एक disheveled, विरल, लामो वा आकर्षक दाह्री विपरीत प्रभाव दिन सक्छ।
सामान्य मा, एकल र विवाहित महिलाहरु प्रजनन संभावनाहरु संग निस्सन्देह उनीहरु कपाल भएका पुरुषहरुलाई रुचाउँछन्या त मुख्यतया अनुहार मा। यो प्रतिनिधित्व गर्दछ एक प्रमुख, गहिरो जराहरु संग आक्रामक चरित्र बहादुर हुन। यसको विपरीत, मुंडा पुरुषहरु कि छाप र दृश्य दिईएन।
महिलाहरु को लागी सधैं एक दाह्री संग एक पुरुष उहाँ धेरै धेरै आकर्षक र मर्दाना हुनुहुन्छ, यो पक्कै हावी सेक्स र टाढा सम्म लाग्छ। दाढीले अनुहारको शरीरलाई अझ राम्रो बनाउँछ, यसको अतिरिक्त एक मानिसले गर्न सक्छ केहि आकार वा अपूर्णता लुकाउनुहोस् अनुहार को दाह्री बढ्न दिनुहोस्। यो महिलाहरु लाई लाग्छ कि उनीहरु धेरै बहादुर र प्रतिष्ठित पुरुष हुन्।
जे होस् यो मा उस्तै छाप छैन ठूलो, लामो र unkempt दाह्री। महिलाहरु मात्र दाह्री को यो प्रकार देखेर phobic हुन सक्छ, किनकि उनीहरु यसलाई सफाई को कमी संग जोड्न सक्छन्।
पुरुषहरु के रुचाउँछन्?
पुरुषहरु प्रयास गर्न रुचाउँछन् लगभग ५-१० दिनको लागि दाह्री बढाउनुहोस्। तेसैले उनीहरु लाई थाहा छ कि धेरै धेरै मर्दानी उपस्थिति जस्तै छ। सबै कुरा अनुहार कपाल को मात्रा मा निर्भर गर्दछ, यदि उनीहरु राम्रो संग आफ्नो स्वाद अनुसार एक उपस्थिति हेर्न को लागी व्यवस्थित गर्दैनन्, उनीहरु लाई उन्मुक्ति को बिन्दु को लागी आफ्नो अनुहार दाढी गर्न को लागी आवश्यक छ।
जब दाह्री मानिसमा हुदैन
यदि दाह्री भएका पुरुषहरु लाई ध्यान दिईन्छ आकर्षक र आफ्नो महान virility को मालिक, तिनीहरूले यसलाई यसको सबै भव्यता मा हेर्न दिनेछन्। यसको लागी हामी तपाइँलाई सबैभन्दा राम्रो सल्लाह दिन सक्छौं "कसरी एक पूरा दाह्री प्राप्त गर्न"वा"दाँत को ख्याल राख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो सुझाव "। यदि तपाइँको कुरा तपाइँको दाह्री को ख्याल राख्नु हो र यो आकार, तपाइँ पनि यहाँ छ सबै सुझावहरु।
कुन कारणले तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ एक दाह्री लगाउनु पर्छ?
दाह्री लगाउनु पहिले नै एउटा संकेत होई धेरै धेरै मर्दानी उपस्थिति बनाए। पुरुषहरु लाई यो मन पर्छ किनकी यो अधिक शक्ति बनाउँछ, उपस्थिति धेरै rougher र चरित्र संग छ, र यही कारण हो कि उनीहरु अधिक आकर्षक देखिन्छन्। यदि तपाइँ यसलाई मुंडा पुरुषहरु संग तुलना गर्नुहुन्छ, तपाइँ देख्नुहुनेछ कि यो लगाएको छैन यसले उनीहरुको अनुहारलाई मीठो बनाउँछ र उनीहरु अधिक विनम्र देखिन्छन्।
एक दाह्री संग एक मानिस धेरै धेरै चिन्हित स्थिति सिर्जना गर्दछ, एक उच्च श्रेणी मा भएको उपस्थिति दिन्छ र विशेष गरी यदि यो बाक्लो, आबादी र राम्रो संग राखिएको छ। उनीहरुको शक्ति दिईयो, यो परिपक्वता को एक संकेत हो, जवान मानिसहरु लाई एक मजबूत दाढी नहुँदा सावधान छन्।
अर्कोतर्फ, दाह्री नभएको पुरुष वा जुँगा भएकाले कम से कम ओभेशन पाउँछन्, यसको मतलब यो होइन कि उनीहरु निर्वाचित छैनन्, तर महिलाहरु धेरै मतदानमा उनीहरु दाह्री भएका पुरुषहरुलाई रुचाउँछन्।
सबैभन्दा चापलुसी यस बर्ष को लागी देखिन्छ
यस शैली मा स्टाइलिस्ट शर्त मा एक प्राकृतिक दृश्य कि व्यक्तित्व को चिह्न। यो सही दाढी भएको प्रश्न होईन, तर यसको सादगी ध्यान देने योग्य छ। कपाल मात्र केहि दिन को लागी उब्जाउन सकिन्छ र त्यसपछि रूपरेखा र चिन्ह, यो ध्यान दिईन्छ कि यो तय गरीएको छ।
अर्को शैली तपाइँ लगाउन सक्नुहुन्छ साइडबर्न बिना दाह्री, यो एक शैली हो कि बढेको छोड्न सकिन्छ र यति प्राकृतिक देखीन्छ। तपाइँ एक साधारण हेरीरहनुभएको छ, एक मुंडा घाँटी बिना, तर त्यो देखाउँछ कि तपाइँ तपाइँको सानो दैनिक हेरचाह लिनुभएको छ। यो overgrown दाढी अनुहार मा धेरै चापलुसी छ वर्ग र धेरै चिह्नित सुविधाहरु संग।
नबिर्सनुहोस् कि हामी सेलिब्रेटीहरु को अनगिन्ती अनुहारहरु छन् जसले आफ्नो अनुहार 'दाह्री संग वा दाह्री बिना' लगाउने छनौट गरेका छन्। हामी लियोनार्डो डि Caprio, एश्टन Kutcher, मारियो Casas र मिगुएल Ángel Silvestre जस्तै केही अभिनेता छ। वा डेभिड बेकहम, लियो मेस्सी वा गोलकीपर इकर कासिलास जस्ता फुटबलर। यदि तपाइँ यस विषय को बारे मा धेरै पढ्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ पढ्न सक्नुहुन्छ "दाढी को विभिन्न प्रकार"।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुष, दाह्री संग वा दाह्री बिना?
यदि तपाइँ मलाई मन पराउनुहुन्न, तपाइँ मलाई किन यति धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ?